के तपाईंले कहिल्यै "उचिवा"को प्रयोग गर्नुभएको छ?
"उचिवा" भनेको काठ वा प्लास्टिकको ह्यान्डल भएको, फराकिलो गोलाकार आकारको, कागजले बनेको गर्मीमा हावाको लागि प्रयोग गर्ने वस्तु हो।
उचिवा, छैठौं शताब्दीतिर चीनबाट आएको भनिन्छ।
नारा र हेइआन् कालमा, उच्च-पदस्थ व्यक्तिहरूले यसलाई समारोह र भाग्य हेर्न, साथै घामलाई छेक्न र अनुहार ढाक्न प्रयोग गर्ने गर्थे। ईडो कालमा, यसको प्रयोग खाना पकाउन र कीराहरू समात्नलाई मात्र नभई, सजावट र विज्ञापनको रूपमा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
अहिले पनि, शहरमा कहिलेकाँही कम्पनीको लोगो भएको उचिवा वितरण गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
यदि तपाईले उचिवा पाउनुभयो भने, पक्कै पनि यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
पर्यावरण अनुकूल उचिवा, राख्ने गर्नु भएमा, यस गर्मीमा एकदम सुविधाजनक हुन्छ।
【प्रसाशनिक वकिलद्वारा परामर्श，कानूनी परामर्श र मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्शको परिचय】
यस पटक, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको सूचना रहेको छ।
आवासको स्थिति र आवास अवधिको बारेमा, तपाईले केही कुरा नबुझेको छ कि?
हरेक महिनाको दोस्रो आइतबारको दिउँसो, प्रसाशनिक वकिलद्वारा तपाईंको प्रश्न र परामर्शको उचित सल्लाह दिनुहुन्छ।
अर्को, फुकुओकामा बस्नु हुने विदेशीहरूका लागि “कानूनी परामर्श” र “मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्श” को जानकारी रहेको छ I
फुकुओका शहरले जून ३० तारिखमा, ६४ वर्षका वा सोभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुलाई नयाँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सूचना पठाइएको छl
खोप कुपन, प्रारम्भिक चिकित्सा जाँच फाराम दुई प्रति, खोप लगाउने बारेको निर्देशिका, खोपको सूचना पर्चा, अनि बुकिंग शुरु हुने मिति र समयको सूचना खामभित्र राखेर पठाइएको छl
फुकुओका शहरमा बसोबास गर्दैहुनुभए पनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कार्यक्रमको अन्त्यमा दिइने फोन नम्बरबाट पुन: जारीको लागि निवेदन दिनुहोस्।
• १२ वर्षको वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरु खोपका लागि योग्य छन्। विदेशीहरू पनि योग्य छन्।
• खोपको संख्या २ पटक हो, ३ हप्तादेखि ४ हप्ताको अन्तरालमा दिईन्छ।
• खोप दिने स्थान, स्थानीय क्लिनिक वा प्रत्येक वार्डको सामूहिक खोप केन्द्र हो।
• बस्दै आउनुभएको वार्ड बाहेक अन्य ठाउँमा पनि खोप लिन सम्भव छ।
• १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुले च्यूओउ फुतोउ क्रूज़ सेन्टरमा पनि खोप लगाउन सकिन्छ।
तेन्जिन र च्यूओउ फुतोउ क्रूज़ सेन्टरको बीच नि:शुल्क शटल बस संचालन भइरहेको छ।
• बुकिंगका लागि खोप कुपन नम्बरको आवश्यक हुन्छ।
साथै, फोन वा ईमेलबाट व्यक्तिगत विवरण सोध्ने छैन।